Akụkọ - Otu iwu China si machibidoro ihe mkpofu plastik ghọrọ 'ala ọma jijiji' nke mere ka mbọ niile baa na ọgba aghara
Site na nkwakọ ngwaahịa grubby nke na-emetụta obere obodo ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia iji laa n'iyi na ikpo ahịhịa sitere na US ruo Australia,
Mmachibido iwu China machiri ịnabata plastik ejirila ụwa emeela ka ọgbaghara na-ada ụda.
Isi mmalite: AFP
● Mgbe imeghari azụmaahịa metụtara na Malaysia, akụnụba ojii soro ha
● Mba ụfọdụ na-ewere mmachibido iwu China dị ka ohere ma dị ngwa imeghari
Site na nkwakọ ngwaahịa grubby nke na-ebuputa obere obodo ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia iji laa n'iyi mkpo ahịhịa sitere na US ruo Australia, mmachibido iwu China ịnakwere plastik ejirila ụwa emeela ka ndị na-emegharị ihe na ọgba aghara.
Ruo ọtụtụ afọ, China weere ọtụtụ plastik dị n'akụkụ ụwa niile, na-edozi ọtụtụ n'ime ya ka ọ bụrụ ihe dị elu nke ndị nrụpụta nwere ike iji.
Mana, na mbido 2018, o mechiri ụzọ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mkpofu ahịhịa mba ofesi ọ bụla, yana ọtụtụ ihe eji emegharị ọzọ, na mbọ iji kpuchido gburugburu ya na ogo ikuku, hapụ mba ndị mepere emepe na-agba mbọ ịchọta ebe ha ga-eziga mkpofu ha.
"Ọ dị ka ala ọma jijiji," Arnaud Brunet, onye isi nchịkwa nke otu ụlọ ọrụ na-adabere na Brussels Bureaulọ Ọrụ nke International Recycling, kwuru.
“China bụ nnukwu ahịa maka nnupụisi. Ọ kpalitere nnukwu ọgba aghara na ahịa ụwa. ”
Kama nke ahụ, ebugharịrị plastik n'ọtụtụ buru ibu na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ebe ndị China na-emegharị emepe agbanweela.
Site na obere ndị na-asụ Chinese, Malaysia bụ nhọrọ kachasị elu maka ndị na-emegharị China na-achọ ịkwaga, na data gọọmentị gosipụtara mbubata plastik gbagoro site na 2016 ruo 870,000 tọn afọ gara aga.
N’ime obere obodo Jenjarom, nke dịdebere Kuala Lumpur, ebe a na-emepụta rọba na-emepụta ahịhịa dị ukwuu, na-agbapụta ajọ anwụrụ ọkụ elekere.
Nnukwu nnukwu mkpofu plastik, nke a wụsara n'èzí, gbakọtara ka ndị na-emegharị emegharị na-agba mbọ ịnagide mbubata nke nkwakọ ngwaahịa site na ngwongwo kwa ụbọchị, dị ka nri na ngwa ncha akwa, site n'ebe dị anya dịka Germany, US, na Brazil.
N'oge na-adịghị anya ndị bi ebe ahụ hụrụ nsị na-esi ísì ọjọọ n'obodo ahụ - ụdị ísì na-adịkarị na nhazi plastik, mana ndị na-eme mkpọsa gburugburu ebe obibi kwenyere na ụfọdụ anwụrụ ọkụ ahụ siterekwa na mkpochapu ahihia plastik nke dị oke ala iji weghachite.
“Anwụrụ ọkụ ndị na-egbu egbu wakporo ndị mmadụ, na-akpọte ha n'abalị. Ọtụtụ na-akwa ụkwara ọtụtụ, ”onye bi na Pua Lay Peng kwuru.
"Enweghị m ike ihi ụra, enweghị m ike izu ike, enwere m ike ọgwụgwụ mgbe niile," ka 47 ahụ gbakwunyere.
Ndị nnọchi anya otu NGO na-enyocha ụlọ ọrụ mkpofu ahịhịa a hapụrụ na Jenjarom, na mpụga Kuala Lumpur na Malaysia. Foto: AFP
Pua na ndị ọzọ nọ na obodo malitere nyocha na, site na etiti 2018, achọpụtala ihe dị ka ụlọ ọrụ nhazi 40, ọtụtụ n'ime ha pụtara na ha na-arụ ọrụ na-enweghị ikike kwesịrị ekwesị.
Mkpesa ndị gọọmentị kpesara ndị ọchịchị enweghị ebe ọ bụla mana ha nọgidere na-enwe nrụgide, n'ikpeazụ gọọmentị mere ihe. Ndị ọchịchị malitere imechi ụlọ ọrụ iwu na-akwadoghị na Jenjarom, ma maa ọkwa na mba niile ga-akwụsịtụ akwụkwọ ikike ikike mbubata.
Emechiri ụlọ ọrụ iri atọ na atọ, agbanyeghị na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị kwenyere na ọtụtụ ha ji nwayọ kwaga ebe ọzọ na mba ahụ. Ndị bi na ya kwuru na ikuku ikuku adịla mma mana ụfọdụ ebe mkpofu plastik dị.
N'Australia, Europe na US, ọtụtụ n'ime ndị na-anakọta plastik na ihe ndị ọzọ edere agbapụ na-agbasi mbọ ike ịchọta ebe ọhụrụ iji zipu ya.
Ha chere nnukwu ego ihu iji mee ka ndị nrụzigharị hazie ya n'ụlọ ụfọdụ wee ziga ya na saịtị mkpofu ka mkpocha ahụ kpokọtara ngwa ngwa.
"Ọnwa iri na abụọ gara aga, anyị ka na-enwe mmetụta mana anyị agabeghị azịza ya," ka Garth Lamb, onye isi oche nke ụlọ ọrụ Waste Management na Resource Recovery Association nke Australia kwuru.
Somefọdụ adịla ngwa ngwa imeghari na gburugburu ebe obibi ọhụrụ a, dịka ụfọdụ mpaghara ikike gọọmentị mpaghara na-anakọta recyclals na Adelaide, South Australia.
Ebe a na-eziga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - site na plastik na akwụkwọ na iko - na China mana ugbu a, ụlọ ọrụ mpaghara na-arụ pasent 80, ebe ọtụtụ n'ime ndị ọzọ zigara India.
A na-azacha ma kpochaa ebe mkpochapu na Northern Adelaide Waste Management Authority na Edinburgh, nke dị na mpaghara ugwu nke obodo Adelaide. Foto: AFP
"Anyị kwagara ngwa ngwa ma lee anya n'ahịa ụlọ," ka Adam Faulkner, onye isi oche nke Northern Adelaide Waste Management Authority, kwuru.
"Anyị achọpụtala na site na ịkwado ndị na-emepụta mpaghara, anyị enweela ike ịlaghachi azụ ahịa iwu China."
Na China, mbubata ihe mkpofu rọba si na 600,000 tọn kwa ọnwa na 2016 ruo ihe ruru 30,000 kwa ọnwa na 2018, dị ka data akpọrọ na akụkọ na nso nso a sitere na Greenpeace na NGO gburugburu ebe obibi Global Alliance for Incinerator Alternatives.
A gbahapụrụ otu ebe na-agwụ ike nke imegharị ihe dị ka ụlọ ọrụ gbanwere Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Mgbe Chen Liwen, onye guzobere NGO gburugburu ebe obibi China Zero Waste Alliance, gara leta obodo Xingtan nke dị na ndịda afọ gara aga, hụrụ na ụlọ ọrụ na-eji ya arụ ọrụ efuola.
O kwuru, sị, "Ndị na-akpụgharị rọba agaala - enwere akara maka 'mgbazinye' nke a kachitere n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ yana ọbụnadị akara mbanye na-akpọ ndị na-emegharị ahụ nwere ikike ịkwaga Vietnam.
Ndịda mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nke gbochiri mmachi mmachi nke China - yana Malaysia, Thailand na Vietnam kpụ ọkụ n'ọnụ - emeela ihe iji belata mbubata plastik, mana ebugharịrị ihe mkpofu ahụ na mba ndị ọzọ na-enweghị mgbochi, dịka Indonesia na Turkey, ndị Akụkọ Greenpeace kwuru.
Naanị ihe e mere atụmatụ pesenti iteghete emepụtagoro ọzọ, ndị na-eme mkpọsa kwuru na naanị ihe ga-eme ogologo oge maka nsogbu mkpofu plastik bụ ka ụlọ ọrụ mee ka ndị na-erughị ala na ndị na-eri ihe jiri obere ihe.
Onye na-eme mkpọsa Greenpeace, Kate Lin, kwuru, sị: “Nanị ihe ga-egbochi mmetọ plastik bụ imepụta obere plastik.”
Post oge: Ọgọstụ-18-2019